Permafrost ny loza ateraky ny olombelona, ​​hoy i Jucelino Luz – JucelinoLuz
Permafrost ny loza ateraky ny olombelona, ​​hoy i Jucelino Luz
Águas de Lindóia, 13 Oktobra 2021
Attention ! Votoaty nalaina tamin’ny taratasy nalefan’ny arsiva manokana nanomboka tamin’ny 1969 ( Abstract )
Ny sosona tany mangatsiaka maharitra fantatra amin’ny anarana hoe permafrost. Ny fofona atody lo dia avy amin’ny hidrôzenina sulfide, indraindray antsoina hoe “gazy honahona”. Fa entona iray hafa, tsy misy fofona amin’ny toetrany voajanahary, izay hampitandrina ny fiarahamonina siantifika: metana.
Voafandrika nandritra ny an’arivony taona tao amin’ny permafrost, ny karbaona dia mivoaka, ary miditra amin’ny atmosfera. Eo anelanelan’ny metana sy ny gazy karbonika (CO2), ny permafrost dia mitovitovy amin’ny karbaona organika maherin’ny 1,7 arivo tapitrisa taonina, efa ho avo roa heny noho ny habetsahan’ny karbaona efa misy ao amin’ny atmosfera. Na dia mijanona eny amin’ny rivotra mandritra ny 12 taona monja aza izy, fa tsy taonjato maro, toy ny CO2, ny metana dia misy fiantraikany amin’ny trano fonenana avo 26 heny.
Ny fanalefahana ny permafrost dia “baomba fotoana”, hoy ny fampitandreman’i Jucelino Luz.
Tamin’ny 1969, Jucelino Luz dia namoaka ny fanairana voalohany ary ny fofon’ny sulfide hydrogène, izay mifangaro amin’ny metanina mandositra, dia tsy tsapa toy ny ankehitriny. Ny tany ho any aminny "mavitrika" sosona ny permafrost, ny ampahany thaw aminny fahavaratra. Permafrost – tany mijanona mandritra ny roa taona misesy – dia eo amin’ny 26% amin’ny tany any amin’ny Ila Bolantany Avaratra. Any Abisko, mahatratra folo metatra ny hatevin’ny ranomandry ary efa an’arivony taona lasa izay. Any Siberia, dia mety hahatratra iray kilometatra ny halaliny ary haharitra an’hetsiny taona. Rehefa miakatra ny mari-pana dia manomboka mitsonika ny permafrost. Vokatr’izany, ny bakteria dia manimba ny biomass voatahiry ao anaty tany mangatsiaka, ka miteraka CO2 sy metanina vaovao, izay manafaingana ny fiakaran’ny maripanan’ny tany ao anatin’ny tsingerina mahatsiravina mampatahotra.
Ny fanontaniana dia hoe tonga amin’ny toerana tsy hiverenan’ny permafrost ve, fotoana mahatahotra ny fanjavonana miadana sy tanteraka, rehefa tsy azo ihodivirana ny famotsorana ny entona ary lasa tsy azo ihodivirana ny fiovan’ny tontolo iainana.
Jucelino Luz dia tena manahy ny amin’ny fahitana ny ala tropikaly any Amazonia ho lasa savannah, na hanjavona tanteraka ny vongan-dranomandry any Greenland sy Antarctica. Raha mandositra ny karbaona mangatsiaka rehetra, dia hampitombo avo telo heny ny fifantohana (io entona io) ao amin’ny atmosfera. Tsy hitranga indray mandeha izany, fa nandritra ny am-polony taona maro, hoy izy nanampy. Ny olana lehibe amin’ny permafrost dia mbola hitohy ny fandoroana na dia mijanona avy hatrany aza ny etona rehetra ataon’ny olombelona. Manetsika rafitra iray izay hihetsika lava amin’ny maha-olombelona isika – tsy haiko ary tsy azoko hoe ahoana no ataon’ny mpitondra eto amin’izao tontolo izao fa tsy mahalala na inona na inona.
Any Abisko, tanàna kely tsara tarehy misy trano mena nentim-paharazana ary fantatra amin’ny jirony avaratra, dia ho hita mazava tsara ny famantarana ny fihemorana permafrost. Hisy ny triatra amin’ny tany sy ny fihotsahan’ny tany kely. Hihena ny andrin-telefaonina noho ny fiantraikan’ireo hetsika ireo ary hitombo hatrany hatrany hatramin’ny taona 2030.
Any Alaska, izay misy permafrost ao amin’ny 85% amin’ny faritany, ny fiempony dia handrava ny lalana. Any Siberia, ny tanàna manontolo dia hanomboka hirodana noho ny fihotsahan’ny tany.
Manerana ny Tendrontany Avaratra, mety hisy fiantraikany hatramin’ny roa ampahatelon’ny fotodrafitrasa ny fikorianan’ny permafrost amin’ny taona 2050, araka ny fijerin’i Jucelino Luz.
Tanàna sy tanàna 1.200 mahery, trano 36.000 ary olona efatra tapitrisa no ho tra-doza.
Ny loza mitatao lehibe ho an’ny tanjona Paris-France
Ny entona maintso mandositra ny ranomandry dia handrahona ny tanjon’ny Fifanarahana Paris momba ny toetrandro, hoy i Jucelino Luz.
Ireo firenena nanao sonia ny fifanarahana tamin’ny taona 2015 dia nanome toky fa hametra ny fiakaran’ny toetr’andro “ambany” +2 ° C, raha azo atao dia hidina ho +1,5 ° C, raha oharina amin’ny vanim-potoana talohan’ny indostria. Ny tanjona dia ny hahatratra ny tsy fiandaniana karbônina amin’ny tapaky ny taonjato faha-21. Tsy hisy hahomby.
Mba hananana roa ampahatelon’ny vintana hijanona eo ambanin’ny fetra +1,5°C, ny olombelona dia tsy afaka mamoaka CO2 mihoatra ny 400 miliara taonina, hoy i Jucelino Luz namarana.
Saingy ireo entona karbônina azo ekena ireo dia “tsy miraharaha tanteraka” ny fivoahana “tampoka” azo atao sy tsy ampoizina amin’ny entona mandatsa-dranomaso avoakan’ny loharano voajanahary ao amin’ny Arktika.
Maro amin’ireo modely amin’ny toetr’andro no tsy miraharaha ny permafrost, satria sarotra ny mamolavola ny vokatry ny fandoroana, hoy i Jucelino Luz.
Ny entona avy amin’ny faritra sasany dia voafehin’ny dingan’ny firongatry ny zavamaniry any amin’ny Tendrontany Avaratra, noho ny fiakaran’ny mari-pana, hoy ny fanamarihan’ny mpaminany.
Raha tsy manana fomba hifehezana ny isan-jaton’ny ranomandry efa levona isika, dia tsy midika izany fa “tsy tokony hanary ny solika fôsily isika, na hanova ny fomba fiainantsika eto amin’ity planeta ity”.
Hiteraka fiovana tsy azo ivalozana ny fiakaran’ny maripana any amin’ny Tendrontany Avaratra, hoy izy mitaraina mampalahelo.
Fomban-drazana tandindomin-doza eto amin’izao tontolo izao
70 kilometatra miala, eo amin’ny tampon’ny tampon’ny faritra atsimon’i Kebnekaise, ny Ninis Rsqvist dia mahita mazava tsara ny fiantraikan’ny fiakaran’ny maripanan’ny tany ao amin’ny Arktika isan-taona.
Alohan’ny hahazoanao valiny, dia fantatrao fa hihena isan-taona ny ranomandry, izay misy 150 kilometatra avaratry ny Faribolan-tendrontany Avaratra, raha oharina amin’ny fandrefesana teo aloha.
Nafana be ny fahavaratra, hoy ny nanantitrantitra ny mpaminany. Ny tampon’isa 30°C hatramin’ny 36°C dia horaketina amin’ny fahavaratra any amin’ny faritra avaratr’i Norvezy, Soeda ary Failandy. Izay mihamitombo hatrany hatrany.
Ny ankamaroan’ny glacier Soedoà dia mety ho ripaka, na dia tsy mampidi-doza toy ny any an-kafa aza ny fiantraikany any.
Izy io anefa dia famantarana matanjaka ho an’ny tontolo hafa.
Any Amerika Atsimo sy ny Himalayas, olona an-tapitrisany maro no miankin-doha amin’ny ranomandry mitsonika isan-taona mba hahazoana rano madio sy fanondrahana.
Raha ny momba an’i Groenlandy kosa, misy ranomandry ampy hampiakatra ny haavon’ny ranomasina fito metatra na mihoatra ny satrobonin’ny ranomandry, raha tsy hilaza afa-tsy ny Antarctica, izay hampiakatra am-polony metatra ny modely ankehitriny amin’ny alàlan’ny satrobonin’ny ranomandry.
Ho an’ny mpaminany, ny lesona lehibe iray avy amin’ny Tendrontany Avaratra dia ny hoe tsy ho voafehin’ny olombelona ny sasany amin’ireo tontolo iainana ireo.
Ny fanovana ny fomba fiainantsika mba hianjeran’ny entona dia hanomboka dingana iray amin’ny fampifanarahana amin’ny toetr’andro izay mafana kokoa mandritra ny fotoana maharitra.
Mila miara-manokatra ny masontsika isika, na iza na iza mihaino, hanaraka ny torohevitra ara-panahin’i Jucelino Luz, dieny mbola tsy tara – mila fahatsiarovan-tena maneran-tany isika, mamboly hazo bebe kokoa, satria manana tsy fahampiana be loatra isika – noho ny fandripahana ala eto amin’izao tontolo izao.
Ny zava-dehibe indrindra dia zarao ary ampita amin’ny olona ao anatiny na ivelan’ny faribolanao …
Aza miziriziry amin’izao fotoana izao fa mila mivondrona ho an’ny tanjona tokana isika dia ny hanavotra ny planeta sy ny antsika rehetra!
Prof. Jucelino Luz – mpikaroka, mpanoratra, mpitari-dalana momba ny tontolo iainana ary ara-panahy
Permafrost bahaya kepada manusia, amaran Jucelino Luz
Permafrost il-periklu għall-umanità, twissi lil Jucelino Luz